विराटनगरमा थपिए ४३ कोरोना संक्रमित, कुन वडामा कति ?
आइतबार, ३२ साउन, २०७७ 0प्रतिक्रिया
विराटनगर, ३२ साउन । विराटनगरमा थप ४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीका अनुसार शनिबार राति ४३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन ।
एकै पटक ४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै विराटनगरमा संक्रमितको सख्या ५२३ पुगेको छ । संक्रमितहरु ५ देखि ६३ वर्षका छन् । उनीहरूकाे २७ र २८ गते स्वाब संकलन भएकाे थियाे । संक्रमित मध्ये १९ जना महिला छन् । शनिबार दिउँसाे विराटगर महानगरपालिका भित्र ३८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका थिए ।
कुन वडामा कति ?
विराटनगर महानगरपालिकाका अनुसार विराटनगर २ मा चारजना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । त्यस्तै विराटनगर ३ मा छ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
विराटनगर ४ मा तीन जना संक्रमित थपिएका छन् । विराटनगर– ५ मा चार जना, विराटनगर– ६ मा सात जना संक्रमित थपिएका छन् । त्यस्तै विराटनगर ८ मा एकजना संक्रमित थपिएका छन् ।
विराटनगर ९, ११ र १५ नम्बर वडामा छ–छ जना संक्रमित थपिएका छन् । याे सँगै विराटनगरमा काेराेना संक्रमितकाे संख्या ५२३ पुगेकाे हाे । संक्रमित मध्ये ८६ जना कोरोना मुक्त भएका छन् । ६ जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ ।